आज गाई र गोरु तिहार मनाइँदै – BFM 91.2
November 15, 2020 November 15, 2020 Bfm	0 Comments
विराटनगर, ३० कात्तिक । यमपञ्चक अर्थात तिहारको चौथो दिन आज गाई र गोरुको पूजा गरिँदैछ । गाईलाई पूजा गर्नाले गाईबाट आमाबाट पाएजस्तै माया पाइने धार्मिक विश्वासमा गाईपूजा गर्ने परम्परा रहेको बताइन्छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमका अनुसार गाईको दूध, गहुँत र गोबर पवित्र हुने भएकाले पनि गाईको पूजा गर्ने गरिएको हो । आधुनिक विज्ञानले समेत स्थानीय गोरस विभिन्न रोगहरुमा अचुक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने भनी अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेपछि गाईको महत्व अझ बढेको अनुसन्धानमा संलग्न गोब्रती योगी सोमराजले बताउनुभयो । आजैका दिन कृषि कर्म गर्न हलो जोतेर वर्षभर साथ दिने गोरुलाई समेत पूजा गरी मीठो खान दिने गरिन्छ । गोरुको साथमा जोत्ने हलीलाई समेत पूजा गरी खाना खुवाइन्छ । त्यसैले आजको दिनलाई गाईतिहार र हलीतिहार समेत भन्ने गरिन्छ ।
आज गोवद्र्धन पहाडको प्रतिमा बनाएर गोवद्र्धन पूजासमेत गरिन्छ । म्ह पूजा (आत्म पूजा) भने आज गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको मत छ । आज बिहान ११ः२७ बजेसम्म औंसी तिथि छ । त्यसपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले म्ह पूजा यसै दिन गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गौतमले बताउनुभयो ।
म्हपूजा विशेषगरी नेवार समुदायले गर्ने परम्परा छ । तिहारअन्तर्गत हिजो साँझ ऐश्वर्य, धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिएको थियो । तिहारको मुख्य दिन भोली भाइटीका मनाइँदै छ । भाइटीकाको उत्तम साइत ११ बजेर ३७ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
← नेपालमा थप १ हजार ९ सयमा कोरोना संक्रमण
राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि एकतावद्ध हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान →
करेन्ट लागेर वृद्धाको मृत्यु